Nuti du’a keenya gammachuun simanna, Oromoonis qabsoo isaatti jabaachuu malee, nutti jaarsummaa erguu hinqabu!” Hidhamtoota lagannaa nyaataa irra jiran. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNuti du’a keenya gammachuun simanna, Oromoonis qabsoo isaatti jabaachuu malee, nutti jaarsummaa erguu hinqabu!” Hidhamtoota lagannaa nyaataa irra jiran.
1.Jaal Daawud Ibsaa
2.Ustaaz kaamiil Shamsuu
3.Jaal Battee Urgeessaa
4.Obbo Leencoo Lataa
7.Ustaaz Abdulaaziz Ibraahim
8.Ustaaz Osaamaa Abduljaliil
Amma hoggantoota keenya gaafachuuf qaallitti balbala irra maatii hidhamtoota waliin dhaabbachaa jiru.Yeroo hundaa sa’aa 3 yeroo ta’uu dha kan balballii qaalliittii banamee namni ool seenuu.Amma garuu sa’aatiin 5 ta’eera.Maaltu dhalatee hanga ammaa akka balballii hin
banamnee hin beekamu.
Shamsuddiin Xahaa Amma Ambulaanciidhaan fuudhamee Hospitaala geeffame.
Yaa Rabbi Hamtuu Nun dhageessisin
Obbo Dajanee Xaafaa lubbuu isaanii tokkitti Oromoof keennuuf murteeffatanii lagannaa guyyaa 10 olii gochuun ammaan tana dadhabanii of wallaalanii kufaniiruu. Ambuulaansiidhaan gara mana yaalaa olaanattii geeffamaniiruu. Oromoo nama akka Obboo Dajanee siif quuqamuu hin argattuu.
Oduu Amma Qaallittiirraa Bahe
Qondaalli olaanaa Koongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO) Obbo Dajanee Xaafaa ambuulaansiidhaan gara hoospitaalaatti geeffamuun mirkanaa’ee jira. Obbo Dajanee Xaafaa namoota 4 sababa lagannaa nyaataatiin dhiyeenya gaggabanii kufan keessaa tokko ta’uun ni beekama.
“Nuti du’a keenya gammachuun simanna, Oromoonis qabsoo isaatti jabaachuu malee, nutti jaarsummaa erguu hinqabu!” Hidhamtoota lagannaa nyaataa irra jiran.
Har’a Ustaazota fi Jaarsolee biyyaa Waliin HD-ABO J/Daawid Ibsaa hogganoota Lagannaa nyaataa irra jiran, gaafachuufi akka nyaata jalqaban dhiibbaa gochuu gara mana hidhaa Qaallittii imallee turre.
Hunduu gama isaatin, Jawaar faa akka nyaata eegalan, kadhatee, dubbate, uummata bakka bu’uun ajaje!
Haa ta’uutii, ijjannoon hogganoota kanaa, ” Jiraannee salphina saba keenyarra gahu arguu irra duunee biyootti makamuuf murteeffanne, taphaaf hineegalle!” Kan jedhu!
” Nuti du’a keenya gammachuun simanna, Oromoonis qabsoo isaatti jabaachuu malee, nutti jaarsummaa erguu hinqabu!” dhaamsa jedhu dabarsan.
Miidhamni qaama isaanii irra jiru daran yaaddessaa ta’us, murannoon fuula isaanii irraa dubbifamu of-duuba deebii waan qabu hinfakkaatu!
Breaking news! Hiriirri Dirmannaa Hayyoota keenya akkuma itti fufeetti jira!